महिलाले पुरुषलाई हेरिरहे के गर्ने ? | EuropeNepal.Net
महिलाले पुरुषलाई हेरिरहे के गर्ने ?
मैले आफ्नो कार्यालयमा काम गर्ने एकजना महिला मित्रलाई प्रसंगवश टुलुटुलु हेरिरहें । मैले त्यसरी हेरेकोमा मुस्कुराउँदै उनले भनिन्, 'त्यसर...
मैले आफ्नो कार्यालयमा काम गर्ने एकजना महिला मित्रलाई प्रसंगवश टुलुटुलु हेरिरहें । मैले त्यसरी हेरेकोमा मुस्कुराउँदै उनले भनिन्, 'त्यसरी नहेर है, २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म जेल सजाय भोग्नुपर्ला ।' 'हो त है', म झस्कें । समाचारमा आएअनुसार नेपाल कानुन आयोगले तयार गरेको यौन दुर्व्यवहार नियन्त्रणसम्बन्धी मस्यौदामा गलत आशयले महिलातिर हेर्नुलाई 'यौन दुर्व्यवहार' भनिएको छ ।
आयोगले मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेपछि उक्त मस्यौदालाई व्यवस्थापिका-संसद्मा प्रस्तुत गरिन्छ । संसद्ले पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएपछि ऐन लागू हुन्छ। यो एन कार्यान्वोयन होला वा नहोला त्यो भविष्यले बताउला ।
केही समयअघिको घटना हो। साँझको समय। त्यसमाथि कम साधन गुडिरहेको अवस्था। त्यतिखेर एउटा बस आउँदा र त्यसमा सिट पाउँदा दसैं आएबराबर हुन्थ्यो। धन्न, एउटा बस आयो र हस्याङफस्याङ गर्दै चढें।
मेरो अघिल्तिर एकजना युवक झोला बोकेर उभियो र ऊनजिकै एकजना युवती थिइन्। बस गुड्यो। बसमा ब्रेक लाग्दा यात्रु आपसमा ठोकिन्थे। मैले ख्याल गरिरहेको थिएँ। जब ती युवक युवतीसँग ठोकिन्थे, युवती आँखा तर्थिन्। वरिपरि दुईतीनजना अरू युवती पनि थिए। उनीहरू खासखुस गर्दै थिए। यत्तिकैमा उनी चिच्याइन् र खलासीलाई बस रोक्न लगाइन्। मैले पनि के भएछ भनेर हेरें।
खलासी आएपछि युवतीले भनिन्, 'यो केटाले मलाई जथाभावी छोयो।' युवकले प्रतिकार गरिहाल्यो तर कसैले पनि थोपो सुनेनन्। युवतीको कुरामा होमा हो मिलाएर एकदुई झापड हान्दै युवकलाई बसबाट ओरालियो। युवती प्रहरीलाई रिपोर्ट दिन्छु भनेर चेतावनी दिँदै थिइन्।
केटा मात्र गलत हुन्छन् र? केटीको पनि गल्ती हुन सक्छ। केही समयअघि मेरो छिमेकीको छोराको धुमधामसँग बिहे भयो। तीन वर्षपछि केटीले सम्बन्ध-विच्छेद गरिन् र केही महिनापछि अर्को बिहे गरेर विदेश गइन्। मलाई थाहै छैन उनले सम्बन्ध-विच्छेद गरेको। केटाले सम्बन्ध-विच्छेद गर्न खोजेको भए धेरै कानुनी अड्चन आउँथे। त्यसमाथि केटाले आफ्नो आधाजसो सम्पत्ति दिनुपर्थ्यो।
कतिपयको कस्तो सोच पनि हुनसक्छ भने एउटासँग बिहे गरेपछि सम्बन्ध-विच्छेद गर्ने र त्यसबाट आधा सम्पत्ति लिएर अर्कैसँग बिहे गर्ने। यो त अधिकारको गलत प्रयोग हो। यसो गर्नु मूर्खता हो।
जहिले पनि केटा मात्र गलत हुन्छ भन्ने छैन। केटी पनि गलत हुन्छन्। हामी केटाको मात्र गल्ती औंल्याउँछौं। केही समयअघि म भाइबरमा एकजना केटीसँग कुरा गरिरहेको थिएँ।
उनी अपरिचित थिइन्, म राम्रो कुरा गर्दै थिएँ तर उनी निहुँ खोज्ने कुरा गर्न थालिन्, उनी नराम्रा शब्द लेखेर गाली गर्न थालिन्, जब मैले पनि केही शब्द त्यस्तै लेख्न सुरु गरें। उनी भन्न लागिन्, अब म प्रहरीलाई रिपोर्ट गर्दिन्छु। त्यसपछि म निशब्द भएँ। उनले भन्दा केही नहुने रे मैले भन्दा महिला हिंसा हुने रे ! कस्तो अचम्म छ?
नयाँ नियमको कुरा गरौं। महिलालाई गलत आशयले हेरिरहे तीन महिना जेल र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने रे ! तर कसरी थाहा पाउने हेराइको आशय गलत वा सही हो भनेर। कसैको हेराइलाई त्यसरी मूल्यांकन गर्न मिल्दैन। केटाहरू मात्र गलत हुन्छन् भन्ने छैन। केटाहरूले मात्र बलात्कार र महिला हिंसा गर्छन् भन्ने छैन।
तर हामी महिलालाई तुलनात्मक रूपमा कमजोर ठान्छौं र उनीहरूलाई बढी अधिकार दिने गर्छौं, जसको गलत प्रयोग भइरहेको छ। वास्तवमा महिला र पुरुष बराबर हुन्। महिला जस्तै पुरुष पनि पीडित छन् तर त्यसको चर्चा हुँदैन। मेरै गाउँमा महिला समूह छ, जो कति शक्तिशाली छ भने लाग्छ, पूरै गाउँ उनीहरूको कब्जामा छ। अलिकति तलमाथि हुनासाथ सबै महिला जुटेर हिंसाविरुद्ध नारा लगाउँछन्।
मेरो भनाइको तात्पर्य महिलालाई अधिकार दिनु हुन्न भन्ने होइन। दिनुपर्छ तर यसको गलत प्रयोग नगरियोस्। सधैं पुरुष मात्र गलत हुँदैनन्। पुरुषले महिलालाई हेरिरहे सजाय रे! तर महिलाले पुरुषलाई हेरिरहे के गर्ने त?!
EuropeNepal.Net: महिलाले पुरुषलाई हेरिरहे के गर्ने ?